Madasha Xisbiyada Qaran oo ka hadashay doorashooyinka Xildhibaannada Gobolada Waqooyi - Awdinle Online
Madasha Xisbiyada Qaran oo ka hadashay doorashooyinka Xildhibaannada Gobolada Waqooyi
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa soo saartay War Saxaafadeed lagu dalbanayo in la ilaaliyo xuquuqda Xildhibaannada ka soo jeeda Gobollada Waqooyi ee loo yaqaano Soomaaliland u leeyihiin in si xor ah oo loogu doorto Magaalada Muqdisho.
Qoraalka Madasha ayaa waxaa lagu taliyay in Guddoomiyaha Aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi looga dambeeyo magacaabidda Guddiyada loo xil saarayo maamulka Doorashada Mudanayaasha ka soo jeeda G/Waqooyi, maadaama uu yahay masuulka ugu sarreeyo ee la doortay kana soo jeeda Somaliland.
Shalay qoraal kasoo baxay Guddoomiyaha Aqalka Sare lagu sheegay in uu xaq u leeyahay Magacaabidda Guddiyada ka Shaqeynaya doorashooyinka Xildhibaannada labada Aqal kasoo galaya Gobolada Waqooyi ee Soomaaliland.
Previous articleMusharixiinta Guddoonka Barlamaanka Hir-Shabeelle oo la diiwaan geliyay
Next articleRW Rooble oo Amar culus dul-dhigay Madaxda Maamulka Gobolka Banaadir
Hay’adda UNICEF oo Wakiil Cusub u soo Magacaabatay Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya oo Mareykanka kala hadashay kordhinta tababarada Ciidamada
Natiijada baaritaanka dilkii Guddoomiyihii degmada Hodan oo loo gudbiyay Xeer ilaalinta Qaranka.
Farmaajo oo dhambaal u diray Madaxweynaha dib loo doortay ee dalka Jabuuti
Askari ka tirsanaa Nabadsugida Jubbaland oo qarax lagu dilay
Qarax ismiidaamin ah oo lagu weeraray Guddoomiyaha Gobolka Baay
Qarax khasaaro geystay oo ka dhacay Muqdisho
Madaxweyne Deni oo sheegay in DF ay dhiigooda baneysay kadib hadalkii wasiir Dubbe
Wiil Dhalinyaro ah oo lagu dilay Magaalada Cadaado